डु’बेको साथिलाइ ब’चाउन जादा न साथिलाइ ल्या’उन सके न’त आफै फ’र्कन सके ! – Life Nepali
डु’बेको साथिलाइ ब’चाउन जादा न साथिलाइ ल्या’उन सके न’त आफै फ’र्कन सके !
रुकुम पश्चिम — बाँफिकोट गाउँपालिका–५, वडगाउँका २० वर्षीय अनिल घर्तीमा साउन ७ गते छुट्टै उमंग थियो । अन्य दिनभन्दा सवेरै उठेर उनले गाउँ चहारे । सुतेउनको योजना थियो– स्यार्पुतालमा माछा मा’र्न जाने । वर्षाको समयमा बिहान धेरै माछा मा’र्न सकिन्छ । यसैले पनि अनिल साथीहरुलाई छिटो गर्न भनिरहेका थिए । १२/१५ जना साथीहरु भेला भएपछि झोलामा रोटी बोकेर माछा मा’र्न स्यार्पुतालको ५ नम्बर वडातर्फको क्षेत्रमा पुगे । स्यार्पुतालमा मिसिने खारखोलामा माछाका आ’हारा कि’रा खोज्ने र त्यही तालमा खोला मिसिएको ठाउँ आसपास माछा मा’र्ने योजनामा अनिल र उनका साथीहरु त्यहाँ पुगेका थिए ।
तर, न त्यहाँ मा’रिएका माछा उनीहरुले खान पाए, न घरसम्म ल्याउन पाए । खान भनि घरबाट लगेका रोटीसमेत खान पा’एनन् । बिहान उमंगमा गएको छोरालाई परिवारले दे’ख्नस’मेत पाएनन् । अनिल एक्लो छोरा थिए घरका । बाबु ७० वर्ष पुगेका छन्, तीनजना दिदीबहिनी । आमा सानो उमेर छँदै बितिन् । परिवारका सबै सदस्य वि’क्षिप्त छन् । अनिलसँगै माछा मा’र्न गएका अ’र्जुन भनेर चिनिने २३ वर्षीय लोकबहादुर घर्तीको घरमा पनि उस्तै ब’ज्रपा’त परेको छ ।का साथीलाई उ’ठाए । उनीहरुलाई तयार हुन भने । उनी आफू पहिल्यै तयार भइसकेका थिए ।
डेढ वर्षीय छोराका बाबु लोकबहादुर त माछा मा’र्न भनी हिँडिसकेपछि बाटैबाट फ’र्केर समेत आएका थिए । तर, फेरि साथीभाईको सल्लाहमा गएका थिए । घर आएर उनले श्री’मतीलाई ‘आज जाँ’गर लागेन, जान्न’ पनि भनेका थिए । पछि फेरि साथीभाईको आग्रहमा फेरि स्यार्पुताल हिँडेका थिए । दोहोर्‍याएर गएका उनी आ’खिरीमा फ’र्केरै आ’एनन् ।
२० वर्षीय अनिल र २३ वर्षीय लोकबहादुर दाजुभाइका छोरा हुन् । उनीहरुसँगै माछा मा’र्न गएका साथीहरुका अनुसार त्यस दिन स्यार्पुताल पुगेपछि कोही बल्छी थापेर माछा मा’र्न थाले त कोही माछाका आ’हारा खोज्न थाले । स्यार्पुतालमा मिसिने खारखोला वरपर पाइने किरा माछाले खाने भएकाले उनीहरु किरा र गड्यौला खोज्न थाले । कोही तालमा पौडी खेल्न थाले ।
उनीहरुसँगै गएका गाउँकै १५ वर्षीय बालक कमल तालमा पौ’डी खेलिरहेका थिए । पौ’डी खे’लिरहेका कमल ए’क्कासी ‘मलाई गा’ह्रो भयो’ भनेर क’राउन थाले । उनी चि’च्या’एको सुनेर अनिल ता’लमा प’से । अनिलले क’मललाई ता’नेर ता’लको कि’नारतिर ल्याउँदै शशी पुनलाई जि’म्मा ल’गाए । कमललाई ता’नेर शशी ता’लबाट नि’स्किए । तर, अनिल भने नि’स्किन स’केनन् ।
अनिलले आ’फूलाई ‘अ’सजिलो भएको’ भन्दै ब’चाउ भ’नेर चि’च्या’एपछि लोकबहादुर अ’निललाई ब’चाउन ता’लमै मि’सिने खो’लामा प’से । खोलासँगै उनी ता’लमा त पुगे तर अनिललाई भे’ट्टा’उन स’केनन् । धेरैबेर लोकबहादुरले अनिललाई खोजे । तर, न लोकबहादुरले अनिलको उ’द्दार गर्न सके न आफू नै बा’हिर आउन स’के । अनिललाई खो’ज्ने क्र’ममै लोकबहादुरको पनि ज्या’न गयो । लोकबहादुरको श’व डु’बेको दिन ७ गते नै भे’टिएको थियो । ८ गते पो’ष्टमार्ट’मपछि उनको दा’हसं’स्कार गरिएको थियो । अनिलको श’व १० गते भेटियो । त्यसै दिन पो’ष्टमार्ट’मपछि ११ गते उनको दा’हसंस्कार गरियो ।
यी दुवै युवा पौ’डी खेल्न जा’न्ने र पहिले पनि स्यार्पुतालमा पौ’डी खे’लिसकेका हुन् । तालको ३ नम्बरतर्फबाट पौडिएर ५ नम्बर वडासम्म पुग्न सक्थे उनीहरु । यो दूरी अन्दाजी ४ देखि देखि ५ सय मिटर मानिन्छ । ‘त्यो दिन के भयो भयो,’ सँगै पौ’डी खेल्न गएका र कमलको उ\_द्धारमा अनिललाई सघाएका शशी पुनले भने, ‘अहिलेसम्म म रा’म्ररी सो’च्न, बो’ल्न स’किरहेको छैन ।’ अनिल र लोकबहादुर फरक–फरक का’रणले डु’बेको हुनसक्ने बु’झाई उनको छ ।
कमललाई उ’द्दार गर्ने बेलादेखि पौ’डी खेलिरहेको हुनाले हा’तखु’ट्टा ग’लेर, था’केर अनिलले अ’सजिलो मा’नेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । अनिल डु’बेको दे’खेर आ’त्तिएर खो’लाबाट ता’लमा हा’म्फालेका लोकबहादुर आ’त्तिएकै का’रण स’मस्यामा प’रेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । आ’त्तिएर पा’नीमा हा’म्फा’ल्दा पा’नी खाने सं’भावना हुने र त्यसो हुँदा पौ’डीखेल्न जा’न्ने मान्छे पनि डु’ब्नसक्ने उनी बताउँछन् ।
Previous वडा कार्यालय भित्रकै अ’श्लील भिडियो बहिरियो !( भिडियो सहित )
Next के आज सुन चाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको पत्या’उनै न’सकिने बजार भाउ –